Kismaayo News » Madaxweynaha oo qaabilay wafuud caalami ah
Madaxweynaha oo qaabilay wafuud caalami ah
Kn:Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafuud ka socotay dalka Sweden iyo Qaramada Midoobay ayaa warsaxaafadeed ka soo baxay waxa uu u dhignaa sidan;
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka horumarinta xiriirka caalamiga ah ee dalka Sweden Gunilla Carlsson iyo xiriiriyaha arrimaha bani’aadamnimada ee Qaramada Midoobay Mark Bowden.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Gunilla Carlsson ayaa ka wada hadlay isbeddelka dalka ka jira iyo dowrka beesha caalamka, ayadoo diiradda la saaray in dowladda Soomaliya ay si toos ah ula macaamisho dalalka iyo hay’adaha caalamiga ah.
“Waxaan aad iyo aad uga wada hadalnay in sidii hore ee Soomaaliya loo kaalmeyn jiray ama loola shaqeyn jiray wax badan laga beddelo oo dowladda si toos ah loola macaamilo, maadaama hadda xilligii ku meel gaarka ahaa aan ka soo baxnay, taasna way ballan qaadeen”ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.